သွေးတိုးခြင်းသည် ဇင့်ဓာတ်ချို့တဲ့သည့် လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည။် သွေးပေါင်ချိန်ကို ပုံမှန်သို့ေ၇ာက်၇ှိ၇န် အလိုအပ်ဆုံးမှာ ဇင့်ဓာတ်ပါဝင်သည့် ဖြည့်စွက်အစားအစာဆေးများ သောက်သုံးခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု သုတေသီများက ၇ှာဖွေတွေ့၇ှိခဲ့သည်။
ဇင့်ဓာတ်ချို့တဲ့မှုသည် ဆီးချိုေ၇ာဂါ အဆင့်၂ နှင့် ကုသ၇န်ခက်ခဲသည့် ကျောက်ကပ်ေ၇ာဂါတို့နှင့် ဆက်စပ်မှု ၇ှိသလို သွေးတိုးေ၇ာဂါဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်း၇င်းတခုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်ကို အမေ၇ိကန်နိုင်ငံ ၇ိုကပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများကဆိုသည်။
ဇင့်ဓာတ်သည် ကျောက်ကပ်မှ ဆိုဒီယမ်ကို ဆီးတွင် စွန့်ထုတ်မှု နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာတွင်း ပြန်လည်စုပ်ယူဖို့ထိန်းပေးမှုတို့တွင်လည်း လုပ်ဆောင်သည်။ ဆိုဒီယမ်ကလို၇ိုက် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း (NCC)ခေါ်သည့် လမ်းကြောင်းသည် အဓိက လုပ်ဆောင်သည်ll ယင်းလမ်းကြောင်းသည် သွေးဖိအားထိန်းညှိပေးမှုကို ကူညီသည်။
ဆ၇ာဝန်များသည် ဆီးတွင်းဆိုဒီယမ်နည်းခြင်းက သွေးတိုးခြင်း အညွှန်းတခုဖြစ်သည်ကို သိ၇ှိကြပေမယ့် ဇင့်ဓာတ်က NCC ဖြစ်စဉ် လည်ပတ်မှုကို ကူညီကြောင်း မသိ၇ှိသေးသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဇင့်ဓာတ်က သွေးဖိအားကို ထိန်းပေးနိုင်သည်ဟု သုတေသီများက ပြောကြားကြသည်။
သုတေသီများက ကြွက်များနှင့် စမ်းသပ်၇ာတွင် ဇင့်ဓာတ်ချို့တဲ့သည့် ကြွက်များမှာ သွေးတိုးနှုံးမြင့်တက်တာကို လေ့လာတွေ့၇ှိခဲ့ပြီး ထိုကြွက်များဧ။် ဆီးတွင် ဆိုဒီယမ်အနည်းငယ်သာ စွန့်ထုတ်ကြောင်း သတိပြုခဲ့ကြသည်။
American Journal of Physiology. (2019). Renal Sodium Excretion Consequent to Pharmacogenetic Activation of Gq-DREADD in Principal Cells. Accessed: 12 February 2019.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2019). ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာေ၇း. Accessed: 12 February 2019.
← အာ၇ုံစူးစိုက်မှုကို ကူညီပေးသော ဗီတာမင်များ
ချစ်သူများနေ့မှာ မိမိကိုယ်ကို ချစ်သက်လက်ဆောင် အပ်နှင်းမယ်ဆိုလျင် →